व्यावसायिक प्रकाशमा चार नयाँ प्रचलनहरू - रीटा
व्यावसायिक प्रकाशमा चार नयाँ प्रचलनहरू
एलईडी वाणिज्य प्रकाश धेरै छिटो विकास हुँदैछ, र हरेक वर्ष नयाँ परिवर्तनहरू छन्। अब व्यक्तिहरू व्यावसायिक प्रकाशको ठाउँमा एलईडी प्रकाशमा बढी ध्यान दिइरहेका छन्, कसरी व्यावसायिक स्थानहरूको प्रकाश आवश्यकताहरू पूरा गर्न उत्तम, व्यावसायिक प्रकाशको अनुभव गर्न प्रकाश प्रयोग गर्ने। प्रणालीले स्वाभाविक रूपमा व्यापारमा चमक थप्न आवश्यक छ!
खोजी अन्तहीन छ, प्रकाश दिने व्यक्ति आदर्शको मार्गमा छैनन्, वा ध्यानको सपनामा। हामी कसरी व्यावसायिक लाइटिंग अधिक सहसिव वा अपील गर्न सक्छौं? व्यावसायिक प्रकाश बजारमा निम्न चार नयाँ एलईडीहरू नयाँ प्रवृत्तिहरू हुन्:
प्रचलन १ हल्का र cons स्थिरता
सबै उच्च-अन्तका व्यावसायिक प्रकाश कम्पनीहरूले अपवाद बिना हल्का र color स्थिरताको अनुसरण गर्न सुरु गरेका छन्, र प्रत्येक ग्राहकले केवल र color्ग प्रदर्शन प्राप्त गर्न चाहन्छ। एकता, यो व्यापारको वातावरणमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, प row्क्ति र यस्तै, हल्का रंगमा भिन्नता देख्न सक्दैन। हाल मार्केटमा एलईडीहरू, चाहे सीओबी प्याकेज, कम-शक्ति चिप प्याकेज, वा उच्च-शक्ति प्याकेज, फरक-फरक रंग क्षेत्रहरू छन्। जे होस् सीओबीसँग २-चरण वा step-चरण र tole्ग सहनशीलता छ, यो अन्य प्याकेज अवस्थाहरू भन्दा बढी हुनेछ। मानक उच्च छ, तर अझै २- background पृष्ठभूमि र areहरू २ चरण र color सहिष्णुतामा छन्, र--चरण र color्ग सहनशीलतामा 5--6 पृष्ठभूमि रंगहरू छन्; यसले सजिलैसँग रro्गीन विकृतिमा नेतृत्व गर्दछ जब बिभिन्न बेचहरूमा डेलिभर हुन्छ। वर्तमानमा, ओरिएन्ट सीओबीको कलर कन्ट्रोल मानक दुई पृष्ठभूमि र colors्गहरू हुन्, जुन र tole्ग सहनशीलता मानक अनुसार नियन्त्रण हुँदैन, तर मानव आँखा पहिचान क्षमताद्वारा नियन्त्रण गरिन्छ।
प्रवृत्ति २ प्रकाश गुण
समाजमा खपतको अपग्रेडिंगको साथ, प्रकाशको लागि आवश्यकताहरू बढी र उच्च हुँदै गइरहेका छन्। प्रकाशको गुणस्तरलाई उपभोक्ताहरू, ईन्जिनियरहरू र डिजाइनरहरू अधिक र अधिक ध्यान दिन्छन्। राम्रो प्रकाशले व्यापार वातावरणको मूल्य बढाउन सक्छ; खराब प्रकाश यसले दसौं लाखौं र सयौं लाखौं लगानीहरू धेरै घटाउन सक्छ। यो पक्कै पनि एक सचेतक छैन। त्यसकारण, प्रकाश गुणस्तर, विशेष गरी मानिस-उन्मुख प्रकाश अनुभव, विशेष महत्त्वपूर्ण छ; केवल प्रबुद्ध आवश्यकताहरू, चमकदार फ्लक्स डिमांडहरू पूरा गर्न मात्र होइन, तर संरचनात्मक र अप्टिकल डिजाइन मार्फत, बत्तीबिना बत्तीहरूको उत्तम प्रकाश आउटपुट प्राप्त गर्न, मानिसहरूलाई सहज महसुस गराउँदछ। यो melatonin उल्लेख गर्न आवश्यक छ। साँझ र राती गतिविधिहरूमा, कम रोशनीको हल्का र color र कम रंग तापमान मेलाटोनिनको उत्पादनलाई उत्प्रेरित गर्न र मानवीय निद्राको गुणस्तर प्रदान गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण, विभिन्न ठाउँ र वातावरणमा प्रकाश गुणस्तरको खोजी भिन्न छ।
चलन3बुद्धिमान
ठुलो डाटा र इन्टरनेटको विकासको साथ, स्मार्ट प्रकाश र बुद्धिमान प्रकाशको ठूलो संख्यामा उल्लेख गरिएको छ। बौद्धिक प्रकाश प्रणाली बुद्धिमान नियंत्रण र प्रकाशको व्यवस्थापनको लागि एक प्रणाली हो। परम्परागत प्रकाशको साथ तुलना गर्दा, यसले बौद्धिक प्रकाश नियन्त्रण, आवाज नियन्त्रण र समायोजन महसुस गर्न सक्दछ। प्रकाश, दृश्य चयन, एक-देखि-एक रिमोट कन्ट्रोल र पार्टिशन लाइटिंग सबै खुला र बन्द छन्, र रिमोट कन्ट्रोल, समय, केन्द्रीकृत, रिमोट, आदि द्वारा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, र यहाँसम्म कि प्रकाश नियन्त्रण गर्न कम्प्युटर प्रयोग गर्नुहोस्। यो विश्वास गरिन्छ कि बैदु, टल्मल, अमेजन र सियामी जस्ता ठूला उद्यमहरूको साथसाथै बौद्धिक प्रकाशको विकास छिटो र उत्तम हुनेछ।
प्रचलन4संरचना विविधता
व्यावसायिक प्रकाश फिक्स्चरको उपस्थिति र संरचना, रिच स्ट्रक्चरल छनौट, र विविध आकारहरूमा उच्च र उच्च आवश्यकताहरू छन्; अनुप्रयोग विकासको उपस्थितिको साथ, उपभोक्ताहरूले अनुभव गर्न सक्छन् कि प्रकाश मात्र प्रकाश मात्र होइन, तर कला पनि हो, जीवन हो। मनोवृत्ति। प्रत्येक बत्तीको मूल्य हुन्छ, जुन व्यावसायिक प्रकाशको दिशा हो। सबैलाई अधिक अनुभवी बनाउन तलका चित्रहरू जोड्नुहोस्।
एलईडी प्याकेजि inमा प्रकाश निकाल्ने दक्षतालाई के असर गरिरहेको छ?
एपिस्टारले राम्रो पिच डिस्प्लेका लागि २ mic माइक्रोन मिनी एलईडी उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्दछ